ဘယ်တော့ မှ ဖွင့်မပြော တတ်ကြပေ မယ့် အမျိုး သား ၉၀%ကြောက်ကြ တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု – Shwewiki.com
ဘယ်တော့ မှ ဖွင့်မပြော တတ်ကြပေ မယ့် အမျိုး သား ၉၀%ကြောက်ကြ တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု
January 3, 2020 By admin Knowledge
အမျိုး သားတွေမှာ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား? သူတို့ဟာ သန်မာပြီး ပြတ်သားတတ်ပုံပေါက်ပါတယ်။ “နည်းလမ်းမရှိဘူး” “ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး”ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ မိန်းကလေးများစွာ ပြောခဲ့ဖူးလိမ့်မယ့် အရာတွေပါ။သို့သော် ဒါက လူ့အဖွဲ့အစည်းက ချမှတ် လက်ခံထားတဲ့ သမားရိုးကျပုံစံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အမျိုးသားတွေမှာ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသား အများစု တကယ် စိုးရိမ်တတ်ကြတဲ့ အရာ (၁၀)ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ
အမျိုးသမီးတွေဟာ ငယ်စဉ်ကစပြီး သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်တိုင်း ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းထားရမယ်၊ ဘယ်လိုပုံစံလေး ဖြစ်နေရမယ်လို့ သွန်သင်ထားခံရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ diet တွေကို အဆက်မပြတ် လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ ဒီပုံစံဖြစ်ရမယ်လို့ သမားရိုးကျ ရိုက်သွင်းထားတာ မရှိပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မစိုးရိမ်ကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မဂ္ဂဇင်းထဲက အမျိုးသားတွေရဲ့ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မနှိုင်းယှဉ်ကြတဲ့ အမျိုးသား မရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အမျိုးသားတွေဟာ အားကစားခန်းမမှာ ဘာ့ကြောင့် အချိန်အများကြီး ဖြုန်းလိမ့်မလဲ? သူတို့အကြောက်ဆုံးကတော့ တစ်ယောက်ယောက်က သူတို့ကို ဘီယာဗိုက်လို့ အပြောခံရမှာကိုပါ။
ပိုက်ဆံက အမျိုးသားတွေ စိုးရိမ်ကြတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ သူတို့ဟာ အနာဂတ်မှာ မိသားစုကို ထောက်ပံ့ရမယ့်သူ၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေအဖြစ် ခံယူထားလို့ပါ။ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူမရှိသေးရင်တောင် relationship တစ်ခုမှာ ပိုက်ဆံက အလိုအပ်ဆုံးအရာ ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ထင်ထာကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ကြပါတယ်။
စံပြအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုက အရပ်ရှည်ခြင်း ဖြစ်တာကြောင့် အရပ်ပုမှာကို အမျိုးသားတွေ စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက အရပ်အမြင့်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် အရပ်မရှည်တဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။
၄။ တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်က သူတို့အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အမျိုးသားတွေရဲ့ မနာလိုမှုက အမျိုးသမီးတွေလို အမြဲတမ်း မသိသာပါဘူး။ သို့သော် ဒါက သူတို့ရဲ့ self-esteem ကို ထိခိုက်ယုံသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သင့်ကောင်လေးကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဟာသအမြင်တစ်ခုနဲ့ ပြောပြတဲ့အခါ စိုးရိမ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ သင့်ရှေ့မှာ မပြသပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ အများကြီး စိုးရိမ်နေတယ်၊ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်လာနိုင်သူတစ်ဦးနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ နှိုင်းယှဉ်တယ်ဆိုတာ ချစ်သူကောင်မလေးအနေနဲ့ သိသင့်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြောက်စိတ်တွေကို ရှင်းလင်းပစ်ဖို့ သူ့ကို ရိုးရိုးသားသား ပြောပြသင့်ပါတယ်။
၅။ အချစ်ရေးမှာ အတွေ့အကြုံနည်းတာ
အမျိုးသားတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ဆိုးကတော့ အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်လို့ အထင်ခံရမှာကိုပါ။ သူတို့မှာ ရှိခဲ့တဲ့ ရည်စားဟောင်း အရေအတွက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလိမ်တာ၊ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ချစ်သူတွေနဲ့ တူဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ တကယ့်တော့ သူတို့ဟာ အမျိုးသမီးတွေလို တစ်ခုခုအမှားလုပ်မိမှာကို ကြောက်ကြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အရာအားလုံးမှာ ရိုးသားမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုတွေက သင့်ကို ပိုပြီး ယုံကြည်မှုခံစားရဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ခေါင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အမွှေးအမျှင်က အမျိုးသားတွေအတွက် အမြဲတမ်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ပါးသိုင်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေးမှမရှိရင် ယောက်ျားမပီသဘူးလို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ထင်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ အမျိုးသားတွေအတွက် ထိပ်ပြောင်မှာကိုလည်း ကြောက်သလို ဆံပင်အရမ်းများလွန်းရင်လည်း ဆံပင်တွေ ရှုပ်ပွနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့အတွက်တော့ လက်တွဲဖော်ကို ဒီပြဿနာတွေ ဖော်ပြရမှာကို အကြောက်ဆုံးပါပဲ။
“ငါ diet လုပ်နေတယ်” ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေဆီကနေ အမျိုးသားတွေ မကြာခဏ ကြားလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးပါ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတစ်ယောက်က diet လုပ်နေတယ်လို့ ပြောရင် ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့စားတဲ့ အစားအစာတွေ၊ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ လူတိုင်းက ကျန်းမာပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်း လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖွင့်ပြောတာ နည်းပါတယ်။
၈။ သူတို့ကောင်မလေးနဲ့ အချစ်ရေး
အမျိုးသမီး မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးထားတဲ့ အချစ်ရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတဲ့ အကြံပေးဆောင်းပါးတွေအကြောင်း ဘယ်လောက်များများ ဖတ်ဖူးပြီလဲ? သို့သော် အမျိုးသားတစ်ယောက်က ဒီအကြောင်း စဆွေးနွေးရင် အမျိုးသမီးတွေက ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အမျိုးသားတွေကို အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတဲ့ “အသည်းမာသူတွေ၊ ရက်စက်တတ်သူတွေ”လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးသားတွေလည်း အရာရာတိုင်းကို အဆင်ပြေချင်ကြပြီး စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။
၉။ ကိုယ့်ကောင်မလေး အရင်က ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ ကြိုက်ခဲ့သလဲ
ချစ်သူကောင်မလေးက သူတို့နဲ့ မတွေ့ခင်မှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး တွဲခဲ့ရင် လက်ရှိကောင်လေးဟာ သူတို့နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ကောင်လေးက သင့်ထက် အတွေ့အကြုံနည်းမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ဒီအကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမစိုးရိမ်ဖို့၊ အတိတ်ကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့ဖို့ သူ့ကို ရှင်းပြရပါမယ်။
၁၀။ စိတ်ခံစားချက်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ပြတာ
ယောက်ျားလေးပဲ၊ မငိုနဲ့ ! ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ အမျိုးသားတွေ ကလေးဘဝတည်းက အမြဲတမ်း ကြားခဲ့ရတဲ့ စကားလုံးပါ။ သူတို့မိဘတွေက သူတို့ကို သန်မာစေချင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုကို ကာကွယ်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခု မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အမှန်ကို ဖော်ပြခြင်းရဲ့ အားနည်းချက် ရှာမှာကို ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ခံစားချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်မပြတတ်ကြပါဘူး။
ယောကျာ်းကောင်း တွေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရသူတွေပဲ ရရှိနိုင်မယ့် အချက်ေ လးတွေပါ…. သင် တို့ရော ယော ကျာ်းကောင်း ချစ်သူ ရှိနေပြီလား..ဖြေခဲ့ကြပါအုံးနော်
ကားခေါင်း မှီ (headrest)က လူ့ အသက် အတွက် အရေးကြီးသ ည့် အသုံးဝင်မှုအကြောင်း